Ogaden News Agency (ONA) – Ciid Wanaagsan gudooma
Ciid Wanaagsan gudooma
Posted by ONA Admin	/ November 5, 2011
Aniga oo ku hadlaya afkii Guddoomiyaha iyo Maamulka Sare ee JWXO waxaan CWXO iyo shacabka Ogadenya leeyahay Ciid mubaarak.Ciidda Carafa waa maalin uu Allaha Weyn ee midka ah u doortay inuu muslimiinta Xajka gudata dambigooda dhaafo xataa haddii uu lamid yahay dhibicda roobka tan iyo maalintii Eebbe abuuray dunida ilaa maalinta qiyaamaha. Waa maalin in ka badan 3ex milyan oo muslimiin ah oo xujay ah ay u ducaynayaan ummadaha muslimiinta oo inagu ka mid nahay. Waa maalin ay in ka badan hal bilyan oo muslimiin ah ay faraxsan yihiin oo ciidayaan. Waa maalin tobanka maal mood ee ka horeysa camalka la falo uu ajirkiisu laban laab yahay. Waxaa mahad leh Eebbaha Weyn ee inaga dhigay kuwa loo ducaynayo ee Muslimiinta ah.
Sidaa daraadeed, waxaan shacabka mujaahidiinta ah ee Ogadenya ugu hambalyeynayaa Ciidda Barakaysan iyo inuu Eebbe halganka xaqa ah ay ku jiraan ku abaal mariyo una aqbalo ducada xujayda iyo muslimiinta ciidaysa. Waxaan munaasabadan qiimaha badan ku baraarujin shacabka geesiga ah ee Ogadenya in gumaysigii na soo dulaystay uu marayo marxalo burbur kama dambays ah. Wuxuu ku guul daraystay taliska Addis Ababa goobaha dagaalka. Askartiisii iyo kuwa uu u kiraystay inay dadka bir ma gaydada ah gumaadaan waxay qarka u saaran yihiin inay kala cararaan, kadib markay u adkaysan waayeen dharbaaxooyinka CWXO. Waxay galeen marxalo amardiido joogta ah iyo baxsi. Taasi waxay keentay in saraakiil badan oo ciidanka cadowga wax la casilo iyo wax la eryo noqdaan. Waxaa ku baraarugay bulsha weynta caalamka dambi dagaaleedka uu taliska dhiigyacabku ka gelayo shacabka Ogadenya. Taas oo keentay in maxfalada waaweyn ee caalamka laga dhaleeceeyo haddii ayna joojin xuquul insaan meel kaga dhaca ay ku hayso shacabka Ogadeny in laga joojin doono gargaarka. Sida la ogsoon yahay taliska Addis Ababa wuxuu ku dhisan yahay gargaarka shisheeyuhu siiyo oo uu u isticmaalo hab ciidan iyo siyaasadba. Waxaa ka mid ah hayadaha dhaleeceeyey ee digniinta adag ee kama dambaysta ah siiyey, UN, EU, iyo Ururo Goboleedyo kale iyo kuwo u dooda xuuqda aadamaha.
Wuxuu taliska cadowga Addis Ababa ku fashilay inuu garaadka iyo aragtida caalamka khaldo isaga oo leh waxaan heshiisyo la galay ururo markii hore ila dagaalamay. Runtii haddii ay jiri lahaayeen ururo si dhab ah u jira oo heshiis la galay Itoobiya waxaa la argi lahaa is beddel (haba yaraadee) maslaxo u ah gumeysiga. Waxaa laga dareemi lahaa halganka oo ka daciifa qaybtii ay ka qaadan jireen. Arrintaasi waxay ka mid ahayd qorshe dhagareedyadii uu weligiiba isku deyi jiray kuna fashili jiray. Inuu ku guuldarestay qorshahaas waxaa markhaati ka ah heerka uu maanta marayo halganka shacabka Ogadenya dhinac kasta.
Waxaan munaasabadan Ciidda Barakaysan si gaar ah hambalyo iyo bogaadin guulaha ay uu soo hoyey ugu dirayaa CWXO kaas oo u gogol xaadhaya taariikh cusub oo ku dhisan caddalad, iskaashi iyo dulmi diid inay ka dhalato Geeska Afrika. Taasina waxay ku suuroobi kartaa oo kali ah in shacabka Ogadenya loo ogolaado aayo ka tlintooda.
Waxaan sida oo kale hambalyo u diri shacabka Geesiga ah ee u adkaystay gumaadka cadowga lana loodin la’yahay iyaga la’aantoodana uuna halganka xaqa ah ee Ogadenya hirgaleen. Waxaan sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u dirayaa jaaliyadaheena ku kala baahsan dunida dacaladeeda ee taageerada la garab taagan qadiyada shacabkooda ee xaqqa ah.
Waxaa sidoo kale aan umahada Muslimiinta ah meelay joogaaba ugu tahniyadayn Ciidan Barakaysan.
Ugu dambayn waxaan munaasabadan shacabka Ogadenya ugu baaqayaa inay halganka ay ugu jiraan madaxbanaanidooda, midnimadooda iyo mintidnimadooda ay sii laban laabaan, guusha inta ka haddayna ay dhamays tiraan.